Ahiana hahazo vahana any ambanivohitra indray ny halatra omby toy ny ao amin’ny distrikan’Andramasina. Araka ny fanazavan’Atoa Andriamanampisoa Bina Liantsoa solombavambahoaka voafidy any an-toerana mantsy dia amin’ny 8 ora alina ka hatramin’ny 1 ora maraina no tena manao ny ataony ireo dahalo izay notsindriany manokana fa misy tambajotra mihitsy. Mandehandeha eran’ny tanàna izy ireo ary mijery sy manao sava hao ny fahitr’omby rehetra. Olana anefa, hoy hatrany ity solombavambahoaka ity ny tsy fahampian’ny mpitandro ny filaminana ao an-toerana. Ao amin’ny tanànan’Antovontany ihany no mba misy izany koa miantso ny fandraisan’andraikitry ny fitondram-panjakana ny tenany. Nomarihiny manokana fa tsy fiara 4x4 no maika ho an’ny distrikan’Andramasina fa mpitandro ny filaminana hiasa hiaro ny vahoaka sy ny fananany.